Otu esi etinye Telegram na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 29, 2021 October 19, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Wụnye Telegram na APT Manager
Nhọrọ 2. Wụnye Telegram na Snap (Snapcraft)
Nhọrọ 3. Wụnye Telegram na Flatpak
Telegram bụ usoro nzi ozi ngwa ngwa dabere na igwe ojii na-ewu ewu. Telegram bụ onye ama ama maka ịnye oku vidiyo ezoro ezo na njedebe na njedebe, VoIP, nkesa faịlụ, n'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Otu n'ime isi ihe nkiri Telegram, ọ bụ ihe pụrụ iche na enweghị njikọ ma ọ bụ nwee mmasị na nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter. Ngwa a bụkwa cross-platform, yana ụdị ngwa dị maka ọtụtụ sistemụ arụmọrụ maka kọmpụta na ngwaọrụ mkpanaka/mbadat.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye onye ahịa Telegram na Debian 11 Bullseye.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa dabara adaba nke ebe nchekwa Debian nyere. Nke a bụ ụdị kwụsiri ike yana echekwara.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na nwụnye.
Ozugbo etinyere ya, kwado nrụnye ahụ site na ịlele apt-cache amụma na Telegram.
A na-ejikwa ọkọlọtọ emelite mmelite dabara adaba & kwalite iwu nke ị gaara eme na mmalite nkuzi.
Ọ bụrụ na ịchọghịzi itinye Telegram na APT, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Debian nwere ike mara Snap ka ọ na-emepụta ma na-elekọta ya site na Ubuntu; agbanyeghị, ọ naghị abịa n'ụdị arụnyere na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Site na ndabara, nke a anaghị ebute ụzọ na Debian mana ọ dị na ebe nchekwa ya. Nke a bụ nhọrọ ọzọ ewu ewu dị ka Snap.
Nke mbụ, wụnye Flatpak na ndabere ya.
sudo apt install flatpak gnome-software-plugin-flatpak -y
ụdị "Y" ugboro X2, pịa pịa "Tinye igodo" ugboro X2 ịga n'ihu na nwụnye.
Ị ga-amaliteghachi nnọkọ gị! Ka ilele akara ngosi Telegram ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esote.
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke Telegram, mee iwu a:
ụdị "Y" ugboro X2, pịa pịa "Tinye igodo" ugboro X2 iji Flatpack wepụ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye onye ahịa Telegram gọọmentị na desktọpụ Debian 11 Bullseye gị n'ụzọ atọ dị iche iche.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, telegram Mail igodo
Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na Fedora 35
Otu esi etinye GIMP na Debian 11 Bullseye